မြန်မာဇာတ်မင်းသမီး၏ စင်မြင့် ဖျော်ဖြေမှု လူပြောများနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » မြန်မာဇာတ်မင်းသမီး၏ စင်မြင့် ဖျော်ဖြေမှု လူပြောများနေ
မြန်မာဇာတ်မင်းသမီး၏ စင်မြင့် ဖျော်ဖြေမှု လူပြောများနေ
Posted by guestkty on Jun 4, 2010 in Other - Non Channelized |3comments
လူငယ်များကြားတွင် ရေပန်းစားခဲ့သည့် သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်သော အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၏ “တောဂေါ်လီ” သီချင်းဖြင့် အောက်တိုဘာ လအတွင်းက သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပါ့သ်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ပဒေသာကပွဲမှ မြန်မာ ဇာတ်မင်းသမီး ဒါလီလင်း၏ စတိတ်ရှိုးဖျော်ဖြေမှုမှာ Youtube အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့လျက် လူပြောများ နေကြသည်။
အိုကွယ်. သူ့အိုးသူလှုပ်တာကို ၀ိုင်းပြောနေကြတယ်။ :D
hope pa, Hla lae’ ma hla pal’ nal’ loat phay nay lite tar Myanmar girl twe thet khar kya tal. I already see this video. It is not good for Myanmar girl reputation. What ever she do, she should not forget she is Myanmar. awful .:(